Mhoro shamwari, pane yedu saiti Zvidzidzo zveGerman zvekuvaka mitongo Pane zvakawanda zvinyorwa zvine chekuita nemusoro wenyaya. Vazhinji veshamwari dzedu vanoda kuti isu tigadzirire zvidzidzo zvedu pakugadzira mitsara muchiGerman.
Pamusoro pechikumbiro chako, isu takanyora edu echiGerman ekuvaka mitongo zvidzidzo kubva zero kusvika kumberi nenzira inotevera. Unogona kuverenga zvidzidzo zvedu pazasi kuti utange nechokutanga chinhu.
Pamusoro Zvidzidzo zveGerman zvekuvaka mitongo Unogona kuiverenga zvakarongeka. Tinovimba kuti iwe uchabatsirwa zvakanyanya kubva kumatopiki edu anotsanangurwa muTurkey zvakafanana.